खुसीको खबर : जापानले २३ सय का’मदार लैजादै, सामान्य भाषा जाने हुने अरु के-के आवश्यक पर्छ ! थाहा पाउनुहोस् «
खुसीको खबर : जापानले २३ सय का’मदार लैजादै, सामान्य भाषा जाने हुने अरु के-के आवश्यक पर्छ ! थाहा पाउनुहोस्
Published : 15 January, 2020 4:19 pm
जापान रोजगारीमा नेपाली युवाको अपेक्षित सहभागिता हुन नसकिरहेका बेला जापानले झण्डै दुई हजार बढी का’मदार लैजाने तयारी गरेको छ । जापान फाउण्डेशनले यही जनवरीमा एक हजार र आगामी मार्चमा एक हजार ३०० नेपाली का’मदार लैजाने तयारी थालेको छ । फाउण्डेसनले एक सूचना जारी गरी परीक्षा तालिका सार्वजनिक गरेको हो ।
गत चैतमा नेपाल र जापानबीच का’मदार लैजानेसम्बन्धी समझदारी भएको थियो । पहिलो चर’णमा जापान रोजगारीका लागि १३ हजार युवाले सहभागिता जनाएका थिए । नेपालबाट नर्सिङ केयरगिभरमा का’मदार लैजाने जापानको तयारी छ । जापानले गतवर्ष विभिन्न १४ क्षेत्रमा विदेशी का’मदार ल्याउने घोष’णा गरेको थियो ।